Sida loogu xiro moobiilka Xiaomi kombiyuutar | Madasha Mobile -ka
Waxaa aad iyo aad u isticmaala mobilada Xiaomi daafaha dunida. Runtuna waxay tahay in summaddan Shiineysku ay soo bandhigto aalado leh qiime wanaagsan oo lacag iyo waxqabad aad u weyn. Dhinaca, waa astaanta moodada. Waxaa intaa dheer, taleefannadooda waa quruxsan yihiin, fududahay in la isticmaalo, aadna waa waxqabad. Haddii aad leedahay mid ka mid ah, waxaa laga yaabaa inaad waligaa weydiisay su'aasha ah sida ku xiro Xiaomi PC. Si aad u fuliso qaliinkan waxaad isticmaali kartaa fiilada noloshaada oo dhan, ama aad u adeegsan kartaa dalabyo kala duwan.
Maqaalka maanta waxaan ku falanqeyn doonnaa siyaabaha ugu wanaagsan ee loogu xiriiri karo aaladda Xiaomi kombiyuutarradayada. Adigoo adeegsanaya isku xirnaanta caadiga ah ee wireless -ka iyo wireless -ka labadaba. Waxaan ku tusineynaa dhammaan hababka jira si aad u doorato midka kugu habboon:
1 Ku xir Xiaomi kombiyuutarka (fiilo)
1.1 Maareeyaha faylka Windows
1.2 Dhaqaajiso xulashooyinka horumarinta
2 Ku xir Xiaomi kombiyuutarka adigoon lahayn fiilooyin
2.1 La Wadaag
2.5 Beddel u ah adeegsadayaasha horumarsan: My Flash Tool
Ku xir Xiaomi kombiyuutarka (fiilo)
Kahor intaan sahamin hababka wireless -ka ee horumarsan, aan si kooban u eegno ikhtiyaarka caadiga ah: isku xirka isticmaalka fiilooyinka.
Maareeyaha faylka Windows
Tani waa shaki la'aan sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee xogta nooc kasta oo taleefan ah loogu wareejiyo PC. Waa, dhanka kale, aan u dhigno habkan, habka hore iyo kan fudud. Sideed u qabataa? Waxaan kuugu sharxeynaa tallaabooyinkan fudud:
Marka hore waxaan isku xireynaa cable asalka ah laga bilaabo taleefanka ilaa kombiyuutarka iyada oo loo marayo mid ka mid ah dekadaha USB -ga.
Dejinta taleefanka waxaan ku dhaqaajineynaa "Habka wareejinta faylka". Tan, kombiyuutarku wuxuu si otomaatig ah u aqoonsan doonaa aaladdayada inay tahay waddo la saari karo oo ku xiran kombiyuutarka.
PC -ga, waxaan galnaa waxyaabaha ku jira galka taleefanka baari kaydinta gudaha ee aaladdaada. Halkaas waxaan ku heli doonnaa dhammaan sawirrada, fiidyowyada, dukumiintiyada iyo wixii kale ee ku jira.
Sida aad arki karto, nidaamku waa mid aad u fudud. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, habka aasaasiga ahi si fiican uma shaqeeyo. In kasta oo si sax ah loo fuliyay tallaabooyinkii hore, waxaan aragnaa in aysan suurtagal ahayn in sawirrada laga wareejiyo moobaylka kombiyuutarka. Sababta ugu badan ee xiriirku u fashilmo waa sababta oo ah kombiyuutarku ma aqoonsanayo aaladda (taas oo lagu muujiyey farriin shaashadda ku jirta).
Dhaqaajiso xulashooyinka horumarinta
Si aan u xallino qaladkan waa inaan hubinnaa in taleefankeenna Xiaomi uu leeyahay xiriirkii habboonaa oo la hawlgeliyey si uu awood ugu yeesho inuu u wareejiyo xogta aalad dibadda ah, sida PC -gayaga. Magaca farsamo ee qaliinka lagu samaynayo ayaa ah "Dhaqaajiso ikhtiyaarada horumarinta". Sidan ayaa loo socdaa:
Marka hore, waxaan geli doonaa goobaha menu telefoonka. Halkaas ayaan toos u aadi doonaa "Kala xulasho" iyo, menu -ka furmaya xiga, waxaan dooran doonaa "Macluumaadka taleefanka".
Taas ka dib, waxaan kicin doonaa faylka version miui. Iyada oo aan ku heli karno "Fursadaha horumarinta".
Marka tan la sameeyo waan ku laaban doonaa "Dejinta taleefanka" si loo raadiyo markan ikhtiyaarka ah "Dejin dheeri ah" iyo ugu dambeyntii, "Fursadaha horumarinta".
Waxaa ka mid ah fursadaha badan ee aan ka helno menu -kan waxaa ka mid ah kuwa hawl -gelinta ama dejinta fursadaha kala duwan. Kuwa ay tahay inaan fiiro gaar ah siino, si aan u hubinno inay firfircoon yihiin, waa kuwan:
Dib u dhigga USB.
Dooro qaabeynta USB. Xulashadan hoos-u-dhac ayaa ka furmaya meesha ay tahay inaad calaamadeyso MTP. Tan, kombiyuutarkeenu wuxuu aqoonsan doonaa taleefanka wuxuuna noo oggolaan doonaa inaan isku xirno.
Kadib markaad intaas oo dhan samaysay, rukhsadaha iyo shaqooyinka moobiilku waxay diyaar u yihiin inay ku xiraan Xiaomi PC. Si taas loo xaqiijiyo, waxaan dib ugu tijaabin doonnaa nidaamka isku xirka dhexdhexaadinta xogta wareejinta. Laakiin xitaa ka dib markaan tan samaynay, waxaa laga yaabaa inaan ogaanno in "xiriirku aan la samayn karin." Sidaa darteed waxaa jiri doona hal wax oo ugu dambeeya oo lagu turunturoodo.
Ogeysiiska shaashadda taleefanka ayaa mar kale na weydiin doona haddii aan rabno inaan ku xirno PC -ga. Waxay ku saabsan tahay a wadahadalka amniga, nidaam adag laakiin loo baahan yahay. Qalabku wuxuu na weydiin doonaa tallaabooyinka aan rabno inaan ku dabaqno fiilada USB. Waqtigan xaadirka ah waa inaad doorataa "Wareejinta faylasha (MTP –Motocol protocol transfer)", wixii intaa ka dambeeya ma jiri doonaan carqalado dambe oo la isku xirayo oo la bilaabayo wareejinta xogta.
Ku xir Xiaomi kombiyuutarka adigoon lahayn fiilooyin
Hadda aan iska ilowno fiilooyinka. Waxaa jira habab badan oo xogta looga wareejiyo taleefankaaga Xiaomi loona wareejiyo PC -ga wireless -ka, si ammaan ah oo dhaqso leh. Kani waa liiska codsiyada ugu fiican, ugu waxtarka badan uguna fudud in la isticmaalo:
Xulashada ugu fiican ee lagu xiro Xiaomi PC: Ii Wadaag
Codsigan, oo hore loogu yiqiinay MiDrop, waxaa soo saaray Xiaomi iyadoo la raacayo qaabka Apple ee AirDrop. Shaki la'aan, maanta La Wadaag Waa xalka ugu wax ku oolka badan in faylasha laga wareejiyo Xiaomi loona wareejiyo kombuyuutarka iyadoon lahayn fiilooyin iyo hab dhammaystiran oo hufan. Si aad u isticmaasho, si fudud ugu xidh moobilkayaga isla shabakadda kombiyuutarkeena oo raac tallaabooyinka soo socda:
Marka hore, aan tagno Codsiga ShareMe ee ku yaal Xiaomi. Tan waxaa sida caadiga ah lagu daraa qaababkii ugu dambeeyay (*)
Marka la furo, waxaan raadinaa ikhtiyaarka "Ku xir kombiyuutarka", kaas oo ku yaal menu bidix ee kore.
Halkaas ayaan ku riixaynaa "Bilow" oo waxaan sii wadi doonaa inaan dejino habka gelitaanka.
Qeybta hoose waxaa jiri doona a Cinwaanka IP (dhab ahaantii, koodh ftp) oo ay tahay inaan ku qorno barowsarka kombuyuutarkeena.
Marka tan la sameeyo, geedka dhammaan faylasha iyo tusaha taleefanka ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Soo dejin kasta oo ku jira PC -ga si fudud ayaa isla markiiba loo samayn doonaa.
(*) Haddii Xiaomi uusan lahayn arjigan, waxaad ka soo dejisan kartaa xiriirkan: La Wadaag.
Wareejinta faylka waaweyn, Drive waa ikhtiyaarka ugu talinta badan
In kasta oo Ii Wadaag ay hubaal tahay ikhtiyaarka ugu raaxada badan uguna waxtarka badan ee lagu xiro Xiaomi PC, haddii ay tahay wareejiyo faylasha waaweyn, waxaa laga yaabaa inay aad u xiiso badan tahay isticmaalka Wadid. Sannadka 2019, ka dib cusboonaysiin la filayay, maareeyaha faylka Xiaomi ayaa sidoo kale la jaanqaaday Google Drive. Codsigan caanka ah habka wareejinta faylka waa mid aad u fudud. Waxaan u sharxeynaa talaabo talaabo:
Ugu horreyntii waa inaan furno App wadista taleefanka gacanta.
Kadibna waxaan dooran doonaa badhanka leh sumadda "+", kaas oo aan ka heli doonno qaybta midigta hoose ee shaashadda, waxaan dooran doonaa faylka kadibna waan riixaynaa "Kac".
Hadda, shaashadda PC -ga, waxaan aadi doonaa Drive oo raadin doonaa faylka aan hadda soo gelinnay.
Marka faylka la helo, waxaan ku riixaynaa badhanka midig oo waxaan dooran doonaa ikhtiyaarka "Download".
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Telegram si aad ugu xirto taleefankaaga Xiaomi kombuyuutarka
Hadaad hayso barnaamijka telegraam lagu rakibay Xiaomi -kaaga, waxaad sidoo kale haysataa aalad xiriir oo ku habboon oo aad faylasha ugu wareejin karto kombiyuutarkaaga iyo sida kale. Si aad u hesho habkan waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Tallaabada ugu horreysa waa fur codsiga Telegram kumbuyuutarkayaga.
Marka xigta, sidaas oo kale ayaan ku samayn doonaa mobile. Haddii aadan weli arjigan rakibin, waxaa lagala soo degsan karaa xiriirkan: telegraam.
Waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno waa raadinta wadahadal kasta oo ku jira arjiga mobilada iyo dir feylka aad rabto inaad ku soo dejiso kombuyuutarkaaga.
Ugu dambayntii, waxaan ka furi doonnaa shabakadda Telegram kombiyuutarkeenna oo guji "Download" ee Faylka. Habkan wareejinta xogta ayaa ah mid deg deg ah, fudud oo aan lahayn fiilooyin.
Ku xir Xiaomi kombiyuutarka adiga oo adeegsanaya WhatsApp
Sida Telegram, sidoo kale Whatsapp Waxay naga caawin doontaa inaan sameyno isku -xirnaanta noocan oo kale ah iyada oo aan lahayn fiilooyin u dhexeeya taleefankeena Xiaomi iyo PC -ga. Geedi socodku runtii aad buu ula mid yahay wixii aan ku sharraxnay ee ku saabsan Telegram, sida hoos ku cad:
Marka hore waxaan furaynaa WhatsApp Web kumbuyuutarkayaga.
Kadibna waan fureynaa Whatsapp on our mobile Xiaomi.
Kadibna waxaan furnaa a wada hadal aan kala sooc lahayn taas oo geliyaan faylka in aan rabno inaan wareejino.
Tallaabada ugu dambeysa ayaa ah inaad gasho Webka WhatsApp oo halkaas ka soo dejiso kombiyuutarkeena.
Beddel u ah adeegsadayaasha horumarsan: My Flash Tool
Xidhiidhka Xiaomi ee kombuyuutarka iyo suurtogalyo kale oo badan oo xiiso leh oo ay ugu mahadcelinayaan Mi Flash Tool
Si loo soo gabagabeeyo liiska xulashooyinkayaga si loogu xiro Xiaomi PC, waxaan tixraaci doonaa codsi aad wax ku ool ah, in kasta oo xoogaa ka adag kuwa kale: My Flash Tool. Taasi waa sababta aan ugu calaamadeyn doonno "kaliya adeegsadayaasha horumarsan", in kasta oo dhab ahaantii qof walba ku dhiirran karo inuu tijaabiyo.
Waa aalad ay soo saartay bulshada isticmaala Xiaomi iyo annaga wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho qaar ka mid ah xulashooyinka taleefanka ee horumarsan. Waxay u egtahay mid xiiso leh? Waxyaabaha aan sameyn karno waxaa ka mid ah, inaan sheegno tusaale ahaan koontaroolka aaladda iyadoo la adeegsanayo amarrada ADB, beddelka ROM -ka taleefanka, iyo sidoo kale in la tirtiro codsiyada qaarkood ee lagu rakibay warshadda.
My Flash Tool waa laga soo dejisan karaa shabakadan, inkasta oo ay sabab u tahay sifooyinkiisa iyo dabeecaddiisa, haddana waxaa wanaagsan in aan la isticmaalin ikhtiyaarkan si looga fogaado dhibaatooyinka. Gaar ahaan ikhtiyaarrada kale ee fudud sida kuwa aan kaga soo hadalnay faqradihii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Android » Sida loogu xiro moobiilka Xiaomi kombiyuutar